कसरी पिनटेरेस्टमा व्यक्तिगत खातामा ब्यापार परिवर्तन गर्ने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
धेरै मानिसहरूले निर्णय गर्छन् तपाइँको Pinterest खाता परिवर्तन गर्नुहोस् विभिन्न कारणका लागि जुन आज यसलाई अत्यन्त आदर्श बनाउँदछ। जे होस्, यी प्रकारका परिस्थितिहरूको लागि धन्यवाद यो सम्भव छ कि उनीहरूले तपाईंलाई विश्राम वा नयाँ दिशा दिन्छन् उनीहरूसँग आजको परियोजनाहरूका बारे सम्भव विचारहरूको लागि।
जबकि यस्तो लाग्न सक्छ कि ब्यापार उपलब्धि हासिल गर्न र व्यक्तिगत खातामा जानको लागि धेरै चरणहरू आवश्यक पर्दछ, तर त्यहाँ त्यस्तो धेरै कुरा छैन जुन त्यो सम्भावनालाई पूरा गर्न आवश्यक छ। दिमागमा राख्नुपर्ने केवल कुरा यही हो प्लेटफर्मले एक समीक्षा गर्नेछ परिवर्तन।
परिवर्तनको लागि विभिन्न कारणहरूको घटनामा, यो सम्भव छ कि कम्पनीको दिशा बदल्न सक्छ वा अझ राम्रो अवसरहरू पाउनको लागि आराममा रहन सक्छ। कुनै श doubt्का बिना, यो सस्पेन्समा रहन र प्लेटफर्मको साथ के हुन्छ भनेर शान्तपूर्वक प्रतीक्षा गर्न उत्तम विचार हो।
कसरी पिन्टेरेस्टमा खाताबाट व्यवसायमा व्यक्तिगतमा स्विच गर्ने?
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, व्यवसाय खाता यसको पक्षमा छ कि व्यक्तिले तुरून्त उनीहरूलाई के फेला पार्न सक्दछन् प्लेटफर्म भित्र खोज्नुहोस्। जहाँसम्म, कहिलेकाँही विज्ञापन तत्वहरूको सुरूवातले धेरै चीजहरू काम गर्दैनन् र आफैंलाई राम्रोसँग अयोग्य आराम दिन यो एक राम्रो विचार हो।
यो सबै दिईएको खण्डमा अवस्था सुधार्नको लागि चीजहरू परिवर्तन गर्न र पृष्ठमा सम्भावित समाधान फेला पार्न यो सम्भव छ। यो समय आउँनेछ कि सामग्रीलाई भिन्न बनाउँनुहोस् र तथ्या of्कको विजयसँग जारी राख्नुहोस्।
खाता व्यवसाय बाट व्यक्तिगत परिवर्तन गर्नका लागि चरणहरू
तपाइँको Pinterest खातामा सामान्य दिनको रूपमा लग इन गर्नुहोस्
विकल्पहरू चयन गर्न तपाईं माथिल्लो दायाँ जानुपर्दछ
पृष्ठ भित्र सेटिंग्स छनौट गर्नुहोस्
शीर्ष बाँयामा जानुहोस् र खाता सेटिंग्स पहुँच गर्नुहोस्
खातालाई व्यवसायबाट व्यक्तिगतमा रूपान्तरण गर्नुहोस्
त्यसोभए तपाईंले खाता नाम सम्पादन गर्नुपर्नेछ र सामग्री साझा गर्न सुरू गर्नुहोस्
यदि खाता प्रमाणीकरण गरिएको छ, यो लाभ उठाउन जारी राख्न यो सम्भव छ। के हुन्छ यदि तपाइँसँग छ दिमागमा राख्नुहोस् कि Pinterest हो सामग्रीको स्थिर समीक्षा गर्नेछ ताकि त्यहाँ चोरी वा पृष्ठ अवरुद्ध गर्दा कुनै समस्या नहोस्।
के तपाइँ पिनटेरेस्टको ब्यापार खातामा फिर्ता जान सक्नुहुन्छ?
यद्यपि यो एक व्यावहारिक सम्भावनाको रूपमा पढिएको छ, यदि यो सम्भव छ भने ब्यापार प्लेटफर्ममा फिर्ता जान परिवर्तन गरेपछि। तपाईंले भर्खर माथि उल्लेखित चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्नेछ।
जहाँसम्म, प्रयोगकर्ताहरूको कारण बिना शाश्वत टिप्पणी वा प्रश्नहरू हटाउनको लागि एक राम्रो विचार हो, व्याख्याको नोट साझेदारी गर्नु हो। यसको भित्र यो सम्भव छ कि के भयो भन्ने बारे स्पष्टिकरण देखा पर्दछ।
यी प्रकारका परिस्थितिहरुलाई धन्यवाद, यो सम्भव छ ह्याकि aboutको बारेमा कुनै समस्या छैन वा रचनात्मकताको ह्रास। यो दिईएको छ, प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक नेटवर्कहरू र सञ्चार प्लेटफर्महरूमा देखेका चीजहरू अघि उनीहरूले दिनदिनै सुधार गर्नका बारे अझ बढी वा विश्वास गर्न सुरू गर्दछन्।
1 कसरी पिन्टेरेस्टमा खाताबाट व्यवसायमा व्यक्तिगतमा स्विच गर्ने?
1.1 खाता व्यवसाय बाट व्यक्तिगत परिवर्तन गर्नका लागि चरणहरू
2 के तपाइँ पिनटेरेस्टको ब्यापार खातामा फिर्ता जान सक्नुहुन्छ?